सिको स्वागतका लागि तीब्र तयारी, सवारीको पूर्वाभ्यास गरिंदै !
सिको स्वागतका लागि तीब्र तयारी, सवारीको पूर्वाभ्यास गरिंदै !
काठमाडौँ - चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्को स्वागतका लागि तीब्र तयारी जारी छ । परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौता भन्दा पनि दुई देशबीच उच्च राजनीतिक सम्पर्क र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अबसरका रुपमा सरकारले भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष कमाण्डमा भ्रमणको भौतिक, सुरक्षालगायतका तयारी भइरहेको छ । नेपाल आउनुभन्दा पहिला भारतको चेन्नई छेउको मामलापुरममा सिलाई स्वागतका लागि भारतले भव्य तयारी गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति सि ११ अक्टोबर अर्थात् २४ असोज अपरान्ह भारतको चेन्नेई पुग्ने कार्यक्रम छ । त्यहाँबाट ५० किलोमिटर परको पुरातन मामलापुरम् (महावलीपुरम् पनि भनिन्छ)मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सिबीच अनौपचारिक वार्ता हुनेछ । मामलापुरम सातौँ र आठौँ शताब्दिमा चीनसँग व्यापार तथा बुद्धधर्म प्रबद्र्धनगर्ने यो महत्वपूर्ण तटीय शहर हो । सि र मोदीबीच कोभालमस्थित समुद्रीतटको होटलमा रात्रीभोजसहित अनौपचारिक वार्ता हुनेछ । चारवटा पुराना सम्पदामा तस्बिर खिचाउने तथा केही चरणमा वार्ता गर्ने गरि तयारी भइरहेको छ । त्यहाँका होटलमा बस्ने विदेशी नागरिकहरुबारे नियमीत रिपोर्टिंग गर्न प्रशासनले निर्देशन जारी गरेको छ । विदेशीहरुलाई निगरानी शुरु भइसकेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार २१ असोजदेखि त्यहाँका पसल बन्द गर्न, होटल खाली गर्न प्रशासनले आदेश दिएको छ । तिब्बति तथा तिनका समर्थकले कुनै प्रकारको प्रदर्शन नगरुन् भन्नेमा सतर्कता अपनाइएको छ । यसअघि वाराणसीमा हुने भनिएको भ्रमण तिब्बतिहरुको सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै दक्षिण भारत सारिएको हो ।
चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जमिनले २०५३ मंसिर १९ र २०मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । उनीपछिका राष्ट्रपति हु जिन्ताओले नेपाल भ्रमण गरेनन् । २३ बर्षपछि राष्ट्रपति सि आउन लागेका हुन् । सि नेपाल आउने तेस्रो चिनियाँ राष्ट्रपति हुनेछन् । २०४० साल चैत ६ देखि १० सम्म चिनियाँ राष्ट्रपति ली सियान्यिानले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उनीपछि २०५३ सालमा जियाङ जमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।